Aqoonta Dibadda Ee Gobolkasta
Ganacsi ka Samee Gobol Kale
Shirkadaha waxaa ugu horeeya nidaam dawladeed iyadoo lagu saleynayo qaab dowladeed. Sidaasoo kale waxaa jira saddex tilmaamood; gudaha, shisheeyaha iyo shisheeyaha. Shirkad gudaha ah waa shirkad ganacsi kudarsata ganacsiga gobolka kudarsan. Haddii shirkadani ay rabto inay sii wadato xafiis ku yaal gobol kale waxay marka hore u baahan tahay inay fayl gasho gobolka waxaana loo tixgelin doonaa shirkad “ajnabi” ah. Shirkad laga soo abaabulay waddan kale waxaa loo qaddarin doonaa inay tahay “shisheeye”. Shirkadaha Incorporated waxay kaa caawin doonaan diyaarinta dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah adiga si aad ugu qalanto heerka shisheeyaha si LLC ama shirkadadu uga shaqeyso dowlad kale.
Si ajnabiga loogu qalmo meheraddaada ku soo biirtay waddan kale, shahaadada heerka fiican waa in laga dalbadaa waddankaaga hooyo laguna soo raaciyaa maaddooyinkaaga shahaadooyinka shisheeye ee loo dirayaa waddanka shisheeye. Adeeggan wuxuu u baahan yahay dukumiintiyo iyo buuxiyo dhammaan gobollada ku lugta leh. Shirkadaha Isku-xidhka ah ayaa hawshani kuu fududayn doona, si fudud noogu sheeg meesha aad ku dhexjirto, faahfaahin kooban oo ku saabsan shirkaddaada iyo waxa ku qoran inaad jeceshahay inaad kuqalmitaan.